9 talaabo oo aad ku kobcin karto jaceylka ay kuu qabto gacalisadaada | Raganimo University
9 talaabo oo aad ku kobcin karto jaceylka ay kuu qabto gacalisadaada
March 2, 20194 minutes
Ragu waxay wada doonayaan in ay kor u qaadaan farxada xaaskooda. Balse markii ay lamaanuhu mudo wada socdaan waxaa dhici karta in la iska hilmaamo muhiimada ay leedahay kobcinta jaceylka. Qaasatan ragga ayaa hilmaama muhiimada ay leedahay in ay ka shaqeeyaan farxada gacalisadooda. Hadaba sidee ayaad si joogto ah ugu kobcin kartaa jacelkiina?
Muuji in aad xiisaynayso nolol maalmeedkeeda
Haddii aad mudo wada socoteen gacalisadaada waxaa laga yaabaa in aad iska hilmaamto in aad wax ka waydiiso xaaladeeda maalinlaha ah. Muuji in aad xiiso u qabto in aad wax ka ogaato waxyaabaha ku cusub nolosheeda. Waxyaabaha ay qabanayso, waxyaabaha dhibaatada ku haya iyo qorshayaasheeda nolosha. Muhiimadu waa in aad la sheekaysato gacalisadaada sida in aad tihiin dad isku cusub oo xiiso isku qaba.
Noqo nin ay isku haleyn karto
In aad ahaato qof la isku haleyn karo, oo sameeya waxyaabaha uu balan qaado waa mid aad muhiim u ah guud ahaan nolosha, gaar ahaan xiriirka iyo guurka. In xaaskaaga ay isku kaa haleyn karto wax ka muhiimsan ma jiraan. Oo haddi aad dhahdo aniga ayaa maanta soo adeegaya in ay arintaas ka seexan karto. In aad ahaato qof wanaagsan oo la isku haleyn karo maalin kasta waa talaabada ugu muhiimsan ee aad jaceylka ku kobcin karto.
Guurku ma ahan wada noolaasho, caruurta iyo hawsha guriga oo keliya. Sidoo kale waxaa muhiim ah in lamaanuhu ay isku qabaan xiiso xag nin iyo naag ah. Oo aad xaaskaaga la fara kaciyaarto, oo aad u muujiso in aad xiiso u qabto in aad sariirta la tagto oo aad jirkeeda dooneyso. La imoow fikrado cusub oo aad ku kiciso dareenka gacalisadaada una muuji in aad ku raaxaysato galmada.
Daacadnimadu waxay xiriir la leedahay isku haleynta. In gacalisadaadu isku kaa aamini karto oo ay ogtahay in aadan been u sheegeyn waa qeyb weyn oo ka mid ah jaceylka. Waxaa hubaal ah in inta badan lamaanayaashu ay been mar uun isku sheegaan balse xooga saar in aad daacad u noqoto xaaskaaga.
Noqo mid furfuran
Daacadnimadu ma ahan oo keliya in markii su'aal lagu weydiiyo aad runta uga jawaabto balse qeyb weyn oo ka mid ah xiriirka lamaanaha ayaa ah in ay wada yeelan karaan sheeko furfuran oo aan waxba daah la saarin. In aad si furan uga wada hadlin kartaan nolol maalmeedka iyo xitaa rabitaanka galmada ayaa sidoo kale muhiim ah.
In aad ka shaqeyso farxada gacalisadaada waa muhiimadaada koowaad. In aad u noqoto deeqsi oo aad diyaar ula tahay dhamaan baahideeda intii aad dabooli karto waa waajib ku saaran. Deeqsinimadu keliya ma ahan in aad lacag siiso balse xitaa in aad u naxariisato oo aad si fiican ula dhaqanto ayaa deeqsinimo ah.
Guurku ma ahan oo keliya in aad ka fikirto xaaskaaga balse aad hilmaamto naftaada. In aad adigu xitaa is daryeesho hadey ahaan lahayd caafimaadkaaga, labiskaaga, jirkaaga, nadaafadaada iwm ayaa qeyb weyn ka noqon kara farxada xaaskaaga.
Noqo lama filaan
In aad xaaskaaga mararka qaar u sameyso waxyaabo lama filaan ah waxay ka midtahay waxyaabaha jaceylka lagu kobciyo. Sida in aad safar lama filaan ah u kaxeyso. In aad hadiyad u soo iibiso. In aad dareenka galmada ku dhaliso xili aysan filayn iwm. Muhiimadu waa in aysan noloshiinu noqon mid ku kooban dhowr arimood oo lagu caajiso.
Noqo mid raali galin bixiya
Horey ayaan mowduuc uga qornay muhiimada ay leedahay in raggu ay raali galin bixiyaan marka ay qalad sameeyaan. Haddii aad lamaane muddo wada socday aad tihiin waxaa hubaal ah in aad is dagaashaan ama muran idin dhexmaro. Laakiin muhiimadu waa in ninka ragga ah uu diyaar u yahay in uu raali galin bixiyo marka uu qalad sameeyo.